नेपाल: घैंटे प्रकरणमा बोले गगन थापा
घैंटे प्रकरणमा बोले गगन थापा
“क्षमा गर्नुहोला; राजनीतिक अपराधिकरण र गैरन्यायीक हत्या दुवैसँग असहमत छु” यो प्रकरणमा मेरो धारणा लेखेर तयार गर्दै गर्दा कैलालीमा एउटा अकल्पनिय घटनाभएको छ जसले स्तब्ध बनाएको छ। यो क्रुर घटनाको जति निन्दा गरेपनि कम हुन्छ । करुणाले भरिएको नेपाली समाजमा क्रुरताको यस्तो विषवृक्षको विजारोपण गर्नेहरु जुनसुकै राजनीतिको आवरणमा आएपनि सजायबाट मुक्ति पाउनु हुँदैन । जनताको सुरक्षाको लागि अफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने वीर प्रहरी हरुलाई सलाम । यस्तो बेलामा सबै तर्फ बाट संयमता चाहिएको छ । म सबैलाई संयमत र सद्भाव कायम राख्न अनुरोध गर्दछु । गएको शुक्रवार काठमाडौंमा प्रहरीको ‘इन्काउन्टर’ मा कुमार श्रेष्ठ ‘घैटे’ मारिएको विषय अहिले चर्चामा छ । यस सम्बन्धमा मेरो नाम पनि जोडिएर केहि समाचारहरू सनसनीपुर्ण रुपमा आएपश्चात मलाइ थुप्रै शुभचिन्तकहरुले आक्रोसित भएर प्रतिकृया पठाउनुभएको छ । ति प्रतिकृयाहरूमा उठाएका मुलभुत प्रश्नहरूका सन्दर्भमा मेरो विचार यहाँ राख्न चाहन्छु ।
१. पहिलो प्रश्न, तपाइ पनि अपराधीको पक्षमा बोल्ने?
अपराधको राजनीतिक संरक्षणले अन्ततः अपराधको राजनीतिकरण हुन्छ र राजनीतिकोअपराधीकरण कुनै पनि हालतमाहुन दिनुहुदैन र अपराधीलाई अपराधकै आँखावाटहेर्नुपर्छ राजनीतिक आँखावाट होइन भन्ने कुरामा म प्रष्ट छु । मेरो कृयाकलाप कहिल्यै पनि कुनै पनि अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण दिनेमा थिएन, छैन र हुदैन । मेरो राजनीतिक जीवनको हरेक मोडमा जव जव त्यस्तो अवस्था आउँछ म सधै एउटा मान्यताको पक्षमा दृढ भएर उभिएको छु , अपराध र अपराधीको न कुनै जात हुन्छ नधर्म, न कुनै दल न विचार न मुल्य । मेरो दलमा आवद्ध होस वा अरु कुनै दलमा सधै अपराधको राजनीतिक संरक्षणको खिलापमा बोल्दै, उभिदै आएको छु । जसरी सामाजिक कुरिति र छुवाछुतमा संलग्नलाइ पार्टी सदस्यता नदिने प्रावधान राखेजस्तै अपराधमा संलग्नलाइ पनि पार्टी सदस्यता दिनुहुदैन भन्ने मान्यता समेत राखेको थिए । हो म एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ, हिजो लागु औषधमा लागेका, विभिन्न अपराधमा कानूनी सजाय भोगेका थुप्रै व्यक्तिहरू आफ्नो विगतवाट प्रायश्चित गर्दै समाजमा पुनर्स्थापनाको लागि तिनै गैह्रकानूनी काम र अपराधको विरुद्धमा केहिगर्न चाहन्छु भन्दै गर्दा त्यसका निम्ति प्रोत्साहन गरेको छु । त्यो पनि लुकेर होईन, सिंगो समाजलाई साक्षी राखेर । तर विडम्वना ति विषयहरू समाचार वन्दैनन ।न म कहिले कुनै अपराधीलाई पार्टीमा भित्राउनु पर्छ भन्नेमा लागेको छु नअपराधमासंलग्नलाई पार्टीले जोगाउन पर्छ भन्नेमा नै लागेको छु । पार्टीभित्रका अनेकन अवसर गुम्छन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि पार्टी भित्र र वाहिर मैले त्यस्ता गलतप्रवृत्तिका विरुद्ध उभिएको छु र उभिने छु। तर चरी र घैटे जन्माउन रहुर्काउनुमा हाम्रो राजनीति र यसमा संलग्नहरूको कुनै न कुनै रुपमा दोष भएकोलेम पनि आफूलाई यसकै हिस्सा ठान्छु र नैतिक रुपमा आफूलाई पनि जिम्मेवार ठान्दछु । म एक राजनीतिकर्मी भएकोले मेरो हरेक कृयाकलाप खुला र पारदर्शी हुनुपर्छ। मेरोबाहिर एउटा र भित्र अर्को जीवनको पाटोछैन । आज एउटा घटनावाट मेरो राजनीतिक आस्था, मेरो जीवनशैली, मेरा मुल्य मान्यता र मेरो विश्वास माथि गम्भिर प्रश्नउठाउने प्रयास गरिएको छ। अहिले भनेका वा भनिएका, उठाइएका र सार्वजनिक भएका यीधारणाहरू गलत छन भन्नेकुरा समयक्रममा मेरो व्यवहारले नै प्रमाणित गर्दै जानेछ नै तर आज चुनौतिका साथ भन्छु-मेरो कुनै पनि अपराधमासंलग्न व्यक्तिसंग कुनै पनि कालखण्डमा अनैतिक र अस्वभाविक सम्बन्ध रहेको, कुनैपनि अपराधमा संलग्नलाइ मैले राजनीतिक संरक्षण दिएको, कुनै खालको गैह्रकानूनी काममा मेरो संलग्नता रहेको छ भन्ने कसैले प्रमाणित गर्छ भने त्यहि क्षण म यो राजनीतिक\_सामाजिक जीवन नै छाड्न तयार छु । मेरो कुरा प्रष्ट छ, घैटेहरूजस्तो वाट समाजलाइ मुक्त राख्नुपर्छ । घैटे र चरी बन्न र बनाउने कुरामा संलग्नता हुने,प्रोत्साहन गर्ने जोसुकै होस उ पनिकानूनको कठघरामा उभिनै पर्छ । यदिकुनै राजनीतिज्ञको उसंग संलग्नता छ र कुने गैरकानूनी कानमा संलग्न छ भने त्यो सहित प्रत्येक कुराको छानविनहुनुपर्छ, मेरो पनि हुनुपर्छ । सवै कुरा आम नागरिकको वीचमा आउनुपर्छ । अव यो विषय उठिसकेको छप्रत्येक कुरा टुङ्गोमा पुगोस ।
२. दोस्रो प्रश्न, के नेपाल प्रहरीले आफ्नो काम गर्न पाउदैन ? ‘इन्काउन्टर’गर्न पाउदैन?गुण्डागर्दी कसरी नियन्त्रण गर्ने त? प्रहरीले घैटे, चरी जस्तोमान्छेलाई मार्दा तपाईलाई के को आपत्ति ?
नेपाल प्रहरीले काम गर्न्\_गराउँन पाउँछ । उसको दायीत्व हो । नेपाल प्रहरीराज्यको बल प्रयोग गर्न पाउने बैद्यानिक निकाय हो । प्रहरीले त्यसलै हतियार बोकेर हिड्न पाउँछ र आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न पनि पाउँछ । आफ्नो जीवनरक्षाको लागि हतियार प्रयोग गर्छ र भिडन्तमा प्रहरीको हातवाट कहिले काहि कसैकोज्यान जान पनि सक्छ । यदि यो घटनामा पनि त्यस्तै भएको हो भने यसलाई स्वभाविकघटनाको रुपमा नै लिनुपर्छ । त्यसैले यो घटनामा प्रहरीको नेतृत्व रगृहमन्त्रीले हामीलाई जे वताउनुभएको छ यदि त्यस्तै भएको हो भने ठिक छ । तर त्यहि क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद भिमसेनदास प्रधान र स्थानीय जनतालेजे भनिरहनुभएको छ त्यस्तो हो भने त्यो अत्यन्त गम्भिर विषय हो । हो म त्यहिचासोले सत्य तथ्य बुझ्न अरु कोहिसंग होइन उनै भिमसेनदास प्रधानसंग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग(NHRC) गएको थिए । यो घटनाको पृष्ठभुमिमा आयोग पनि जोडिएको,आयोगमा सुरक्षा मागेर निवेदन दिएको केहि दिनमा घटना घटेको भन्ने कुरासार्वजनिक भएको अवस्थामा न्याय माग्न होइन सत्य तथ्य बुझ्न आयोग गएको हुं । १ बर्ष अगाडि दिनेश अधिकारी ‘चरी’ मारिदा होसवा युद्धको वेलामा दोरम्बामा विद्रोही मारिदा होस, शान्तिप्रकृया पछि शक्तिखोरमा लगेर रामहरी श्रेष्ठको हत्या हुदा होस वा हिरासतमा शिव पौडेलको हत्या हुँदा, डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा होस वा नन्दप्रसाद अधिकारी लगायतद्वन्द्व पिडितको न्यायको लडाईमा, कानून विपरित भएका घटनामा प्रत्येक पटक मेरोचासो रहदै आएको छ र सार्वजनिक गर्दै पनि आएको छु । कानूनलाई दुरुपयोग गरेरकोहि पनि नागरिक अन्यायमा पर्नु हुँदैन भन्नेमा म हिजो पनि सचेत थिए र आज पनि छु । चरिको हत्या पश्चात केहि सांसद साथीहरूले संसद अवरुद्ध गर्दा मैले सार्वजनिक रुपमा भनेको थिए- नेपालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छैन र संविधानभन्दा माथि पनिकोहि छैन । कानूनले जे गर्न र जे नगर्न निश्चित गरेको छ सरकारका निकायहरू पनित्यसै अनुसार चल्नुपर्छ र नागरिक पनि त्यसैअनुसार चल्नुपर्छ । यो वेलाम कोव्यक्ति कस्तो थियो भन्ने आधारमा कुनै पनि घटनाको जज गर्नु हुदैन । तर कसलेकिन कसरी हत्या गर्‍यो निष्कर्ष निकाल्ने अधिकार भने हामीलाई छैन । घटनाकोनिश्पक्ष छानविन हुनुपर्छ र वास्तविकता जनताले थाहा पाउनुपर्छ ।’ (हे. चरीप्रकरणले उठाएका केहि प्रश्नहरूः https://www.facebook.com/thapagk/posts/759734874070427 ) अहिले घटना घटेको सामाखुसी काठमाडौंको ६ नं क्षेत्रमा पर्छ, त्यो क्षेत्रको सांसदले सार्वजनिक क्षेत्रमा र संसदमा एउटा कुरा उठाउनु भएको छ- ‘त्योइन्काउन्टर होइन, गैह्रन्यायीक हत्या हो । मृतक कुमार श्रेष्ठले राष्ट्रियमानव अधिकार आयोग(NHRC) मा जीवन रक्षाको लागि निवेदन दिएका थिए । NHRC ले प्रहरीलाई सोध्यो’ के तपाईहरू उसलाई खोजिराख्नु भएको छ? श्रावण २७ गतेप्रहरीले उत्तर पठायो ‘कुमार श्रेष्ठलाई हामीले खोजिराखेका छैनौं ।’
२७ गतेहामीले खोजेका छैनौ भनेर NHRC लाई जवाफ पठाउने प्रहरीले भाद्र ७ गते प्रहरीले भने; हामीले काठमाडौंको मस्ट वान्टेड सुचिमा रहेको गुण्डा नाइकेलाई इन्काउन्टरमा मार्‍यौं ।’ मलाई भिमसेन सरले गर्नुभएको अरु कुनै तर्कसंग सरोकार थिएन र छैन तर उहाँकोयो तर्कले भने मलाई गम्भिर वनायो । छिमेक भारतमा गैह्रन्यायीक हत्या श्रृङ्खलाको केहि अध्ययन गर्ने मौका पाएकोले स्वभाविक रुपमा मेरो मनमा पनि यहीप्रश्न उव्जियो कतै हामी गैह्रन्यायीक हत्याको डरलाग्दो अराजकतातर्फ त जादैछैनौं? यो कुराको सत्य तथ्य बुझ्ने निकाय NHRC मात्र थियो । NHRC संग सत्यतथ्य नबुझिकन म कुनै धारणा बनाउन चहान्नथिएँ र त्यसकोलागि NHRC को अध्यक्षसंग प्रत्यक्ष भेटेर मात्र बुझ्न सकिन्छ भनेर आयोगले जानकारी गराएपछी भिमसेन सर संग म आफै गएको हुं । म कुनै निवेदन बोकेर न्याय माग्न गएको हैन । आयोगको अध्यक्षसंग सत्य तथ्य बुझ्न गएको हो। हामीसंगको भेटमा NHRC का अध्यक्षले माथिभिमसेन सरले भनेको जस्तै कुरा हामीलाई वताउनुभयो । यसको वास्तविकता जनताले थाहा पाउने कि नपाउने? यस सन्दर्भमा मेरो कुरा प्रष्ट राख्न चाहन्छु । चरी र घैटेहरू जन्मन नै दिनुहुन्न र जन्मिहाले भने हुर्काउनुहुन्न र यो समाजलाई चरी, घैटेहरूवाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्नेमा दुइमत छैन । राज्य, बर्दीधारी मात्र होइन कुनै पनि अपराधिकसमुह वा व्यक्तिको भयवाट नागरिक त्रसित हुने वातावरणको अन्त्य हुनैपर्छ । उसलेकानून वमोजिम सजाय पाउनुपर्छ । कानून नभए बनाउनुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपलेगर्दा अपराधीले कुनै उन्मुक्ति पाइरहन्छन भने कुनै राजनीतिक व्यक्ति वासंगठनले त्यस्तो गर्न नपाउने गरि कानून वनाउनु पर्छ । तरराज्य(मन्त्री\_प्रहरी)ले हामी आफैसंग भएको कानूनको प्रयोगवाट अपराध र अपराधीनियन्त्रण हुदैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको हो भने यो एकदमै खतरनाक संकेत हो । कानूनसम्मत प्रकृयावाट न्याय प्राप्त हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा सरकार नै पुगेको हो भने आम नागरिकले यो राज्यव्यवस्था र न्याय प्रणालीमा किन विश्वास गर्ने ? तर पनि तपाई ठान्नुहुन्छ कि चरी र घैटेहरुवाट समाजलाई मुक्त गराउन भन्दै गरिएको त्यो इन्काउन्टर वास्तविक नभएर फेक नै थियो भने पनि जायज हुन्छ अनि प्रहरीलाई पनि न्यायीक प्रकृयामा गएर हुदैन इन्काउन्टर नै विकल्प हो भन्ने लाग्छ र तपाई पनि हत्या गैरन्यायीक भएपनि ठिक हो नै भन्नु हुन्छ भने विनम्रतापूर्वक म तपाईसंग आफ्नो असहमति राख्छु ।’अपराधिक कृयाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई दल र नेताहरूले संरक्षण गर्छन, उनीहरूका कर्तुत ढाकछोप गर्छन र कारवाही गर्न दिदैनन, राजनीतिकसंरक्षणमा उनीहरू छुट्छन र जनतालाई दुःख दिन्छन । त्यसैले कारवाहीमा पुग्नप्रहरी वाध्य हुन्छ ।’ भन्ने नाममा हामी कानून विपरितका कार्य गर्न प्रहरीलाईप्रोत्साहन गर्ने? कि त्यस्ता राजनीतिज्ञ र त्यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न संयन्त्र वनाउने? कानून बनाउने त्यसको प्रयोग गर्ने कि कानून सानुन जे सुकै होस हामीलाई परिणाम चाहियो भन्ने ? मेरो विचारमा हाम्रो यस्तो दोहोरो मापदण्ड सरासर गलत हो । गलत मात्र होइन, एउटा संक्रमणमा रहेको लोकतन्त्रको लागि डरलाग्दो रोग हो । समाजमा घैटे, चरीजस्ता अपराधी छन र यीनको हत्या गर्दा आममान्छे खुशी हुन्छन भन्ने कुरालाई आधार भनाएर नियोजित ढङ्गले हत्या भएको होभने त यो झन डरलाग्दो विषय हो । समाजमा गुण्डागर्दी,भ्रष्टाचारी,वलत्कारीप्रति ठुलो घृणा छ त्यो स्वभाविक हो । आम मानिसहरूचाहन्छन यीनिहरूलाई कडा भन्दा कडा सजाय होस । (संविधान सुझावको वेलामा समेतफाँसीको माग थियो ।) ख्याती श्रेष्ठको हत्या हुँदा पनि यस्तै कुरा उठेको थियो । तर समाजको यही मनोविज्ञान वुझेर प्रहरी संगठनभित्र लोकप्रियताका लागिगैह्रन्यायीक हत्याको शुरुवात भएको हो भने कुनै पनि सभ्य समाजले यसलाई स्वीकार्न सक्दैन र गर्नु हुँदैन ।
३. तेस्रो प्रश्न, तपाई यस्तो गलत विषयको पक्षमा बोल्ने ?
मलाई बिश्वास छ म गलत विषयको पक्षमा उभिएको छैन । म घैटेको पक्षमा उभिएको होइन न त मलाई उभिनु नै छ । म एउटा इस्युको पक्षमा उभिएको छु । मेरो आस्थाको आधारभुतमान्यतामा दरोसंग उभिन सकिन भने मेरो अरु कुराको कुनै अर्थ रहदैन? म मेरोब्रम्हले सत्य देखेको पक्षमा सधै उभिएको छु, एक्लै भए पनि बोलेको छु, जुन दिनत्यो गर्न छोड्छु त्यो दिन म नै रहदिन र नरहन तयार छु । मेरो मुद्दा प्रष्ट छ,गुण्डागर्दी र संगठित अपराधलाई निर्मुल गर्न राज्यको प्रहरी लगायत हर निकाय ले गर्ने प्रत्येक काममा संगसंगै हिड्ने छु, त्यहि क्रममा नेपाल प्रहरीले भनेको जस्तो त्यो इन्काउन्टरमा भएको घटना थियो भने प्रहरीको पक्ष्यमा उभिनेछु तर त्यो गैह्रन्यायीक हत्या हो तर पनि हत्या गुण्ड को भएकोले ठिक नै मान्नुपर्छ भन्ने कुराहो भने त्यसमा चै मेरो सहमति छैन । पुलिस इन्काउन्टरको रुपमा प्रख्यात गैह्र न्यायीक हत्या भनेको कुनै न्यायीक प्रकृया वा निर्देशन विना राज्य वा यसका एजेन्टद्वारा मुडभेढका नाममा गरिने हत्या हो । गैह्रन्यायीक हत्या प्राय अपराधिक चरित्र भएका मानिएका व्यक्तिहरुप्रति लक्षित हुने गर्दछ । हाम्रो जस्तो सामाजिक परिवेश तथा संस्कारमा जहाँ न्यायीक प्रकृया प्रति जनताको विश्वास कम छ र प्रकृया भन्दा परिणामलाई महत्व दिइन्छ त्यहाँ यस्ता कार्यलाई सराहना गरिन्छ । न्यायीकप्रकृया प्रतिको जनताको गुनासोको आडमा राज्यका निकायवाट हुने यस्ता कार्यलाईआम जनताले भारतमा पनि शुरुका दिनमा राम्रै लोकप्रियता हासिल गरेको हो । तर त्यसपछिको दिनमा अवस्था त्यस्तै रहेन । राजनीतिक मान्छेहरूले प्रहरीको त्यही हतियारलाई आफ्नो विरोधीलाई सक्ने हतियारको रुपमा दुरुपयोग गर्न थाले । पछिल्लो समय गैह्र न्यायीक हत्या अराजक हुँदै संस्थागत र संस्कारको रुपमा देखा पर्नथालेपछि पहिला समर्थन गर्ने जनता बाटै यसको चर्को विरोध हुनथाल्यो । यसै सन्दर्भमा उच्च न्यायलयले सन २०१४मा वढ्दो गैह्र न्यायीक हत्याको परिवेशमा प्रहरी प्रशासनलाई एक वाधयकारी निर्देशिका नै जारि गरेको छ । उक्त निर्णयले हरेक नागरिकलाई सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार र न्याय सम्बन्धि हकको महत्वलाई पुनर्स्थापित गरेकोछ । कानूनी प्रकृया विनाको भिजिलान्ते न्यायलाई समर्थन र प्रोत्साहन गर्नुकमजोर समाजिक चेतना मात्र हो । आधुनिक सभ्य समाजमा यस्तो भिजिलान्ते न्यायलेस्थान र प्रोत्साहन पाउनु हुदैन भन्ने म ठान्दछु । अलोकप्रिय हुने डरले यस्ता गैह्रन्यायीक हत्यामा मौन रहनु जनताप्रतिको विश्वासघात हो । जहाँसम्म राजनीतिक क्यारियरको कुरा छ, राजनीति करियर होइन जहाँ प्रत्येक पटक हिसाव किताव गरेर कुनै विषयको पक्ष वा विपक्षमा वोलिन्छ. कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुँदा अञ्जानमा कोहिसंग कसैले खिचेको फोटो राखेर मेरो सम्बन्धको काल्पनिक कथा लेख्नेसंग मलाई कुनै प्रष्टिकरण दिनु छैन । विहानदेखि साँझसम्म मेरो शिर्षकराखेर समाचार बेच्नेसंग पनि मलाई भन्नु केहि छैन । म मलाई माया गर्ने र मलाईआशा र भरोषाले हेरिराख्नु भएका लाखौं मान्यवर र साथीहरलाई भन्न चाहन्छु, मेरोमतदातालाई भन्न चाहन्छु-मेरो नैतिक धरातल कमजोर छैन, अञ्जानमा केहि गल्ति भएहोलान तर जानेर कुनै गलत काम वा प्रवृत्तिको पक्षमा लागेको छैन र लाग्दिन पनि। त्यसैले म विनम्रतापुर्वक अनुरोध गर्दछु मलाई आफ्नो कुरा राम्रोसंग सम्प्रेसित गर्न नसक्दा तपाईको भावनामा चोट पुगेको छ भने म क्षमा चाहन्छु तर प्रष्टसंग दोहोर्‍याउन चाहन्छु म एउटा लोकतन्त्रवादी हुँ, म राजनैतिक दलहरुकोशुद्धता र राजनितिको पवित्रताको पक्षमा जति दृढताका साथ उभिन्छु, संस्थागत गुण्डागर्दी बाट समाजलाई मुक्त गराउन जति दृढता को साथमा उभिन्छु, जनताको लोकप्रिय मतको दुरुपयोग गरेर गरिने राज्यको गैह्रन्यायीक हत्या हो भने मत्यसको बिपक्षमा पनि त्यतिनै दृढताका साथ उभिन्छु, मारिने जोसुकै किन नहोस । अन्त्यमा
मलाई थाहा छ आजको माहोल यस्तो छ मैले जति कुरा भने पनि बहुसंख्यक मानिसहरू आजमेरो कुरासंग सहमत हुनु हुन्न तर फेरि पनि मेरो विश्वास यहि नै हो- तपाई म संग असहमत हुन सक्नु हुन्छ तर तपाईको असहमत हुन पाउने कुराको लागि म जिवनभर लडिरहन्छु ।
News From: रातोपाटी
Labels: Gagan Thapa speaks about Ghaite encounters, Nepali Congress Leader Gagan thapa, Nepali Youth Leader Gagan Thapa